Ganacsatadda Qaadka Kenya oo Dowladadooda ugu baaqay inay Aqoonsato Somaliland – Radio Daljir
Ganacsatadda Qaadka Kenya oo Dowladadooda ugu baaqay inay Aqoonsato Somaliland
Abriil 25, 2018 4:42 g 0
Ganacsatada Qaadka Dalka Kenya ayaa sheegaya in suuq weyn oo dhinaca qaadka ah uu kaga xannibanyahay Somaliland islamarkaana ay u baahanyihiin in ay dowladda wax ka beddesho mowqifkeeda Somaliland.
Ururka Ganacsatada Qaadka Dalka Kenaya aaya sheegay in Qaadkooda loo yaqaan Miiraa,uu dalab fiican ka heysto Somaliland laakiin ay dhibaato ku tahay canshuurta xad dhaafka ah ee ay saartay Somaliland.
Guddoomiyaha Ururka Ganacsatada Qaadka Kenya Kimathi Munjuri,ayaa sheegay in ay tartan adag ka wajahayaan Qaadka Hereriga ee dalka Itoobiya oo Somaliland laga cuno,kaas oo uu sheegay in uu ka qiimo jabanyahay midka Kenya maaddaama aanay saarneyn canshuur xad dhaaf ah sidoo kalena uu dhulka ka soo galo Somaliland.
Kimathi Munjuri,waxaa uu sheegay in bartilmaameedkooda uu yahay 150 Tan oo qaad ah oo ay maalinkiiba geeyaan degaannada Maamulka Somaliland,hayeeshee hadda uu marayo kaliya 50 Tan,waxaana uu sababta ku sheegay Somaliland oo aad canshuur u saarta maaddaama Kenya aysan xiriir diblomaasiyadeed oo toos la lahayn Somaliland.
Waxaa uu sheegay in Hargeysa iyo degaannada kale ee Maamulka Somaliland ay uga banaantahay suuq fiican oo uu ku kobci karo Ganacsigooda laakiin ay caqabad ku tahay Somaliland oo aqoonsi raadis ah Kenyana ay u taqaan Gobol ka mid ah Somaliland.
Musharixinta Guddoonka Barlamaanka Somaaliya oo Khudbado jeediyeey (dhegayso)
Shirkadda Somtel oo Maanta Degaanada Puntland kusoo bandhigay Adeega Kaamil (dhegayso)